घर अमेरिकी स्टेर्स एडिन्ससन कभानी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
सेप्टेम्बर 9, 2017
एलबीले पूर्ण स्टोरीको फुटबल प्रतिमा प्रस्तुत गर्दछ जसले सबैभन्दा राम्रो नामले उपनामद्वारा जान्छ; 'एल Matador'। हाम्रो एडिंससन कभानी बचपन स्टोरी प्लस अनलल्ड जीवनी तथ्य तपाईले आफ्नो बचपनको समय सम्मको उल्लेखनीय घटनाहरु पुरा खातामा ल्याउनुहुन्छ। विश्लेषणमा प्रसिद्धि, पारिवारिक जीवन र उनीहरूको बारेमा धेरै ज्ञात तथ्याङ्कहरू धेरै र बन्द र अन-पिच भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ।
हो, सबैले आफ्नो क्षमताको बारेमा चिन्ता छ तर केहि कम एडिनसन क्याभनी जीवनी कथा हो जुन धेरै रोचक छ। अब थप adieu को बिना, सुरु गर्न।
एडिनसन कभानी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: बाल्यकाल
एडिन्ससन रबर्टो कभनी गोमेजको जन्म भएको थियो प्रणय दिवस, कि 14 फेब्रुअरी 1987 साल्टो, उरुग्वे मा, लुइस क्यभानी (बुबा) र बर्ट गोमेज (आमा) द्वारा। संयोगवश, उनको राष्ट्रिय टीम जोडी लुइस सुरेज उस्तै शहरमा (साल्टो) जन्मिएको थियो, जनवरी महिनामा मात्र एक महिना। एडिनसन केवल3पुरुष बच्चाहरु को एक परिवार को अंतिम बच्चाहरु को रूप मा जन्मिएको थियो।
बढ्दै गयो, उनले फुटबलमा प्रेम पाएका थिए। उनीहरूको कडा मेहनती आमाबाबुले प्रोत्साहित गरे जुन कभनीले पक्का गरे "सधैं खाना र कपडा थियो,"। He शहरी परिवेश र साल्टोको भित्री भागमा थोरै।
कवीनी छोराको रूपमा खेल्ने तंग सडक पिचका फलहरू पछि उनको उत्कृष्ट प्रविधि र मानसिक शक्तिमा देखिएका थिए। मूलतया, कभानीले लगातार साथीहरूको विरूद्ध खेल खेलेका थिए, जसले प्रायजसो उनीहरूलाई घुमाए। केभनीले9मा उमेरमा 1996 मा गरेको थियो अनौपचारिक म्याचको अन्त्यमा 'पुराना कार्गो' किनकि उनीहरूलाई उनीहरूको क्षेत्रमा बोलाउँछन्।
आफ्नो प्रारम्भिक वर्षको सही रूपमा, कभनीले स्टारमको बाटोमा देखाए। यद्यपि एक पटक उनी डनबूओमा गएर उनले समायोजन गर्न केही समय लागेन तर एक पटक उनीहरूले अनुकूल गरेपछि चाँडै उनीहरूको जवान अकादमीका जवानहरू बन्न थाले।
एडिनसन कभानी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: प्रसिद्धिको कारण
उनले मन्टुयेडियोको सबैभन्दा सफल जवान अकादमी, डेनबियोसँग आफ्नो पहिलो आधिकारिक युवती अनुबंधमा हस्ताक्षर गरे जसले एल्भारो रिकोबा र डिएगो फोर्लानलाई मन परायो।
जवान एडिंसन काभनी
एकदम राम्रो फुटबल खेल्न कोभनीको लागि कठिन थियो। यद्यपि, फुटबलरको परिवारबाट आउँदै गरेको कुरामा समस्या आयो। उनको फुटबलर बुबा र वृद्ध भाइले उनलाई आफ्नो क्यारियर सुरु गर्न लायक सबै आवश्यक सहयोग दिए।
एडिनसन कभनीले डेन्युबियो युनियन प्रणालीको माध्यमबाट 2006 मा पहिलो टोलीको लागि पहिलो खेलमा अग्रता लिएका थिए। एडिंसन केभनीले आफ्नो शारीरिक क्षमता र दृढतालाई अगाडि बढाएपछि उनीहरूले राष्ट्रिय सफलता पाए। उनी एपर्टुरा एक्सएनएमएक्सएक्स च्याम्पियनशिप-विजेता टोलीको भाग रहेको थियो, उनले पहिलो पटकको पहिलो गोलमा नौ गोल गरे।
एडिन्ससन कभनी युवा क्यारियर
31 जनवरी 2007 मा, उहाँले € 4.475 मिलियन को लागि पाल्मो द्वारा किनिएको थियो। केभनीले फाइनान्सिनाको विरुद्धमा एक होम लीग म्याचमा 11 मार्च 2007 मा पहिलो पटक बनाइदिए। जुलाई 2010 मा, क्याभनी नेपोलियो को साथ एक पांच साल को अनुबंध मा हस्ताक्षर गरे। बाकि प्राय प्रायः भन्नुहुन्छ, इतिहास हो।
एडिनसन कभानी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: पारिवारिक जीवन
फेथर: तिनको बुबा लुइसले एक जना युवकको रूपमा शौकिया स्तरमा फुटबल खेलाए।
एडिन्सन कभानीको डड - लुइस क्यभानी
लुइस एक कडा परिचालक पिता हो जसले आफ्नो घर (3 छोरा र एक पत्नी) लाई सबै भन्दा राम्रो लाग्यो जुन उनीहरूको सपना देख्न सक्थे। उनी विशेष गरी आफ्नो अन्तिम पुत्र एडिन्ससनको नजिक हुनुहुन्थ्यो जसले फुटबलको एन्टिन्सीलाई आफ्नो आधारमा यसको आधारमा समर्थन गर्यो। लुइसले आफ्नो केटाको उदयलाई ठूलो क्रेडिट लिन्छ।
तथापि, गर्भ गर्व गर्व कहिल्यै एडिनसनको उपहार र उनको उदारता दुवै बारेमा कुरा गर्दा कहिल्यै बढी पीडा लाग्दैन। लुइसको अनुसार, "मलाई र एडिन्ससनले हाम्रो घरबाट सुन्दर पोखरी 30 किलोमा माछा मार्न प्रयोग गर्यो। हामी पुरानो ट्रक लिन चाहन्छौ जहाँ मैले काम गर्ने र माछाबाट माछा गरे। त्यहाँ धेरै ठूला फ्याट डुब्सहरू थिए जुन ठूलो अमीर स्वामित्वमा छन्। मलाई एडिससनले यसो भनिन् ... 'बुबा, त्यो दिन म फुटबलमा विजय गर्छु, म तपाईंलाई ट्रक र ठूला डुङ्गालाई जस्तै पार्छु। उहाँ समयमा 11 हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग यी ठूला सपनाहरू थिए र म केवल हँसिन्छु। तर आज, म उरुग्वेमा सबैभन्दा ठूलो ट्रक र डुङ्गा छ " उनी भन्छिन्, तिनीहरूलाई हेर्दै।
"यो जीवनमा तपाईंको गर्भ देख्दा गर्व गर्भवती शब्दहरू व्यक्त गर्न गाह्रो छ, तपाईले उहाँलाई नयाँ मार्ग खोल्नुहुन्छ जब तपाई उसलाई माया गर्नुहुन्छ उनीहरु देख्नुहुन्छ र तपाईले देख्नुभएको छ कि उहाँले आफ्नो मार्ग परिवर्तन गर्नुभएको छैन। एक नै नम्र बच्चा बनेको छ जुन कम प्रोफाइल कोयम राख्छ र सजिलै संग आफ्नो जीवन जिउँछ।
मातृभाषा: Berta Gómez एडिससन क्याभनीको आमाको नाम हो। उरुग्वे स्ट्राइकरको आमाले एकपटक बताएको छ कि उनको छोराको भोकले उनीहरूलाई आफ्नो क्यारियरको माध्यमबाट आमाको हेरचाह प्रदान गर्न केवल उनीहरूको सबै गतिविधिलाई कसरी खर्च गर्छ।
एडिन्सन काभनी मातृ- Berta Gomez
भाइरस: तिनको ठूलो भाइ वाल्टर गोगीलीमोन हो। उहाँ9वर्षको उमेरमा आफ्नो सानो भाइ एडिससन कभनी भन्दा पुरानो हुनुहुन्छ। केवल क्यभानी जस्तो, वाल्टर पनि स्ट्राइकर छ। उनले 310 उपस्थिति बनाए र क्लब र देश दुवैको लागि 109 लक्ष्य बनाए।
एडिंससन कावानी भाइ - वाल्टर ग्लिलियेलोन।
एडिन्सन कभनीको द्रुत भाइको नाम ईसाई हो। उहाँ पनि स्ट्राइकर हुनुहुन्छ र उनीहरूको तुलनामा एक बर्ष मात्र पुरानो छ।
एडिन्ससन कभनीको भाइ - ईसाई
एडिन्ससन कभानी पारिवारिक जीवन वास्तव मा फुटबल पुरुषहरु र घर को एक समर्थन मातृ को आसपास केंद्रित छ। यसको लागि धेरै समान एलेक्स ओक्सलेड-चामबेरी र Henrikh Mkhitaryan।
एडिनसन कभानी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: सम्बन्ध जीवन
एडिन्ससन कभनीको प्रेम कथा अप्स र डाउन्स भन्दा भरिएको छ र धेरैजस्तो देखिन्छ एंथोनी मार्शल र धेरै विपरीत कि मार्कस Rashford, रोबर्टो फर्मिनो र गब्रिएल यीशु। यस लेखमा पूर्ण कथा छलफल गरिएको छ।
केभनी सधैँ उनको बचपन प्रिय माया मारिया सोलाडेड कैबिस यारुसको साथ प्रेममा रहेको छ।
मारिन्स सोलाडेड कैबिस यारुस संग एडिनसन कवानी लाइट स्टोरी
तिनीहरू दुवै विवाहित भए र दुई छोराहरूसित आशिष् पाए। तिनीहरूको पहिलो पुत्र, बोटुस्ता मार्च 22 को XNumXnd मा जन्मिएको थियो।
एडिन्ससन केभानी पारिवारिक फोटो
उनको दोस्रो छोरा लुकास मा जन्म भएको थियो 8 मार्च 2013। बाउटास्ताले लुकास आफ्नो बुबाको धेरै मनपर्छ।
एड्ससन काभनीले छोरा, लुकाससँग सम्बन्ध राखे
एडिन्ससन केभनीले आफ्ना छोराहरूसँगको बलियो सम्बन्ध राखेका छन्। उहाँले आफ्ना केटाहरूलाई हरेक विजय उत्सवमा लिनु मनपर्छ।
एडिन्ससन काभानी संस - लुकास (बाँया) र बोटुस्ता (दायाँ)
एडिनसन कभानी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: रिश्ते मुद्दाहरू
एक चौंकाने वाली खबर 2014 मा आए जब कभनीले भने कि उनको र उनको पत्नी दुई वर्ष पहिले एक शुरुआती विभाजन पछि, उनको तलाक पाएको थियो। उनीहरूको विवाह दुई वर्षसम्म मात्र भयो।
यो एक समय थियो कभनीको व्यक्तिगत जीवन कुनै न कुनै पैचबाट गए। पिचमा आत्मविश्वासको कमीबाट उहाँ साँच्चै सामना गर्नुहुन्थ्यो।
तिनीहरूले प्रकट गरेपछि अलग गरेपछि उनले कथित रूपमा 22-वर्षीय इटालियन महिलासँग एक सम्बन्ध भएको थियो पछि पछि मार्सा रोजेरिया वेंटोन (तल चित्रित) कोसर्टकाबाट थाहा थिएन नेपल्स जहाँ कवानी खेलेका थिए। यो यो तस्वीर थियो जुन विभाजन र तलाकको नेतृत्व भयो।
पत्नी अटोल्ड स्टोरीमा एड्ससन क्याभानीले धोका दिए
उनको पूर्व पत्नी (मारिया) ले तलाक भन्दा अघि उनको बारेमा बताए।
"म यो मान्छेमाथि भरोसा छैन। के तपाईं आफ्नो पतिको जन्म पछि केही दिन पछि आफ्नी पत्नीलाई छोड्ने पतिमाथि भरोसा राख्नुहुन्छ? ... हाम्रो छोरा लुकासको जन्म हुँदा, मैले सिके कि त्यो अर्को केटीको साथ थियो। यो एक झटका थियो जब मैले खराब तस्वीर देख्यो। उनले उरुग्वे मा जन्म दिन को फाइदाहरु को वर्णन गरे नेपल्स को तुलना मा शांत रहयो जहां हामी घेरिएको छ (प्रेस द्वारा)। तिनी मलाई फ्रीर महसुस गर्न चाहन्थे र यस तथ्यको आनन्द उठाउन चाहन्थे कि म हाम्रो नयाँ जीवन निर्माण गर्न व्यस्त छु। जब फर्कियो, मैले हाम्रो विवाहलाई बचाउन हरेक तरिकामा प्रयास गरें। मेरो बच्चाहरू आफ्ना बुबाको रूपमा हटाउन चाहँदैनन्, मैले सोचेका थिए कि हामी रिक्त हुन सक्थ्यौं। यो आशाहीन थियो। एडिन्ससन एक फरक व्यक्ति र अपरिचित भए। "
मारियाले अदालतमा आफ्नो तलाक युद्धको जित जिते। अन्त्यमा अदालतले क्याभनीलाई मासिक € 25,000 मासिक भुक्तानी गर्न आदेश दिए जुन आफैले र बच्चाहरूको लागि हो।
एडिनसन कभानी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: सार्दै
पछि तलाक 2013 को मध्य द्वारा अंतिम रूप दिइएको थियो, पुरा ध्यान Ventrone मा थियो, उनको वैवाहिक विघटन पछि महिला। केहि बिंदु मा, यो पनि अफवाह थियो कि केवानी आफ्नो पूर्व मालकिन संग उनको सम्बन्ध औपचारिक बनाउन को लागि तैयार थियो। चीजहरू तपाईसँग जान लागेनन्। त्यस्तो कुरा भयो र चीजहरू बीचको अन्त भयो।
एडिन्सन कभानी ले सारियो र सुन्दर जोसेन ब्रर्गर्ड संग एक नयाँ सम्बन्ध भित्रियो।
एडिन्ससन कभनी लाइट स्टोरी - नविकरण
जोसेन बर्गरर्ड एक चौंकाने, श्रमिलो मोडेल र साम्बा उरुग्वे देखि नर्तकी। उनीसँग सांस्कृतिक व्यवस्थापनमा डिग्री छ।
तलासी पछि एडिन्ससन केभनीको गर्लफ्रेंड (जोसेन बर्गरर्ड)
तिनी इटालीलाई उरुग्वेमा मिडिया सनसनीकरण गर्छन्। दुर्भाग्यवश बेला बेला, अर्जेन्टिना, उरुग्वे मा जन्मिएको र उठाइएको यस सुन्दर प्राणीको बारेमा धेरै जानकारी छैन। हामी अझै पनि खुसी हुँदैछौं। उनले हरेक ठाउँबाट उनको अनुहार सहित अद्भुत क्षणहरूलाई आफ्नो क्लब, प्रशंसकहरू र टोली साथीहरूको साथ मनाउन खेलको पिच समावेश गर्दछ।
एडिनसन कभनी न्यूज गर्मिमेस्टर- जोसेन बर्गरर्ड
एडिन्ससन कभनी लाइट स्टोरी सधैँ जस्तै कि मीडियाको लागि रुचिको फोकस हो डेनी पेय पानी र Ousmane Dembele जसको सम्बन्ध जीवन अहिलेसम्म व्यापक रूपमा अज्ञात छ जस्तो कि लेखनको समय।
एडिनसन कभानी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: हबी
शुपशस्चर एडिन्सन क्याभनीलाई शौकको रुपमा शिकार गर्न मन लाग्छ। तपाईं सधैं भएको छ फुटबल पहिलो, त्यसपछि एडीको लागि शिकार। उहाँले यसलाई मनपर्छ र उहाँ दुवैमा राम्रो शट छ
उनले उत्तरी उरुग्वेमा आफ्नो पिता संग बिजुलीको यात्रामा संलग्न गरेको छ। जंगली डुङ्गा र झाडीको सुँगुरको उनको शिकारले प्राय: उत्तर उरुग्वेको पहाडी जङ्गलमा रातको मृत घडीमा गर्छ।
तल श्री लुइस क्यभानी एक XXUMX क्यालिफोर्निया राइफललाई सम्बोधन गर्दै उनले आफ्नो छोराको साथ आफ्नो स्वर्गीय शिकार सत्रको लागि प्रयोग गरेको थियो, दुई बोराहरू,6वटा घोडाहरू र जाहिरा तौर पर, केही संरक्षित प्राणीलाई हामी यस ब्लगमा प्रकट गर्न अनुमति छैन।
एडिनसन कभानी 'परिवारको शिकार कथा
उनको बुबाको अनुसार,
"एडिसनसन बच्चा थियो जब हामी सधैं यो गरे र हामी अझै पनि गर्छौं। हामी दुवैलाई माछा माछा र शिकार समय खर्च गर्न मन पर्छ। हामी रातभर मात्र तीन घण्टा सुत्छन्। एडीको जंगलमा कहिल्यै रोक लगाउन नसक्ने! मत्स्य पालनको लागि, उहाँले सधैं भन्नुहुन्छ कि यसले उसलाई शान्त गर्दछ। यो सधैं हाम्रो लागि जीवनको एक तरिका हो, हामी हाम्रो नवीनतम लडाईहरु मा प्याक पैक गर्न प्यार गर्छन। एडिसन सुँगुरको शिरलाई प्रेम गर्दछ "... लुइस भन्छन्।
एडिनसन कभानी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: धार्मिक जीवन
एडिन्ससन एक समर्पित इंजीलियन ईसाई हुनुहुन्छ। उहाँ क्याथोलिकवादसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सम्पूर्ण जीवनमा सम्बद्ध हुनुहुन्छ। उनको क्रिश्चियन विश्वास तल साबित भएको छ। तलको तस्वीरमा, एडी कोचिंग स्टाफ को एक सदस्य संग प्रार्थना गरिरहेको थियो। यो मा थियो जुलाई 2011, 24 मा ब्यूनस आयर्सको मोनेटम्यान स्टेडियममा आयोजित पेरुआय विरुद्धको 2011 कोपा अमेरिका फुटबल टूर्नामेंट अन्तिम अन्त। तिनको विश्वासले तिनलाई देख्यो र उरुग्वेले आफ्नो खेल जित्यो।
एडिनसन क्याभनी धर्म र विश्वास - अनर्थ कथा
एडिनसन कभानी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: उनको आइडल
पहिलो, उहाँले गब्रिएल Batistuta को लग रहेको छ, जो उनले भन्छन् उनको फुटबल मूर्ति। एक बच्चाको रूपमा, केभनीले पूर्व अर्जेण्टीनी स्ट्राइकर र कथाकार गब्रिएल बेटिस्टाटालाई चित्रण गरे। ब्याटिस्टाटा जस्तै, केभनीले आफ्ना कपालहरू आफ्नो कानमा अतीत गरे। निस्सन्देह, उनले प्रयास गरेका छन् र ब्याटिस्टाटाको शैली र शैलीको प्रत्येक पक्षमा राख्न सफल भएका छन्।
किन क्यभानीले बेस्टिस्टुटो-अनल्ट स्टोरीलाई चित्रण गरे
काभनीको ब्याटिस्टुटोको प्रेमले उनलाई इटाली लीग युरोपको पहिलो हिज्जेमा खेल्ने बल्टिस्टुटालाई पछ्याउन उत्प्रेरित गर्यो। त्यसोभए, यो तथ्यमा आधारित छ कि एक बच्चाको रूपमा, कभनीको दादापट्टिहरू मेरिनालोलोमा भेटेका छन् जुन फ्लोरेंसबाट केही किलोमिटर टाढा रहेको छ जहाँ बटिस्टाटोको फ्येरेन्टिना स्थित छ।
उनको भव्य आमाबाबुले प्रायजसो फ्लोरेंटिनाको किंवदंती प्ले हेर्न जान्छ। यो केभनीको पछिल्ला बटिस्टाटाको पाटोको सपना कस्तो छ। दुबैमा देखाइएको जस्तो समान उत्सव छ।
एडिन्सन कभानी, गब्रिएल बैटिस्टुटा समानताहरू - अनल्ट स्टोरी
एडिनसन कभानी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: उनको उपनाम
खेलाडीको रूपमा उल्लेख गरिएको छ "एल Matador"। उपनामले नेतृत्व गर्ने स्ट्राइकरको अस्वीकार गर्दछ जसले सधैँ बुल लिन सक्षम बनाउँछ सींगहरूद्वारा, हरेक समय उनी खेलकुद मैदानमा फर्कन्छन्!
एडिनसन केभानीको उपनाम पछि मिथक
एडिनसन कभानी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: उसको गाडी
एडिन्ससन सुन्दर कम कारहरू मनपर्छ। उहाँले रातो फेरारी 458 चलाउनुहुन्छ।
एडिन्सन कभानीको कारको प्रकार - अनल्ट स्टोरी
उनको फेरारी 458 इटाली अनुमान गरिएको छ 200,000 यूरो भन्दा बढी। कारमा 325 किमी / घन्टाको उच्च गति छ। एडिनसन प्रायः फुटबलका थुप्रै फुटबल खेलाडीहरूको बक्समा छैन।
मार्को वेरर्ती बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ को जीवनी तथ्य
नोभेम्बर 27, 2017